DHAGAYSO:Puntland oo go’aan culus kasoo saartay Oromada ku sugan deegaanadeeda & Somaliland oo xaalad cakiran jiidaha Tukaraq.. – Puntlandtimes
GAROOWE(P-TIMES)- Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays dhado ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Bosaaso waxa uu uga digay in la dhibaateeyo dadka magan galayada u jooga gobolka ee ka soo jeeda Qoomiyada Oromada. RIIX HALKAN OO KA DHAGAYSO CODKA
Gudoomiye Dhado ayaa sheegay in aan loo baahnayn in xiisad laga abuuro ninkii Oromada ahaa ee dhawaan magaalada Bosaaso lagu jidh dilay, waxaana uu sheegay in ninkan xaaladiisa caafimaad ay la wareegtay dowladda hoose ee magaalada Bosaaso.
Gudomiyaha ayaa sheegay in arintan ay doonayso in Somaliland ay ka faa’iidaysato kadib markii ay Puntland culays ka saartay dhaq dhaqaaqyada ay kawado Somaliland Tukaraq.
Hadalkan ayuu gudoomiyaha ka sheegay shir uu Bosaaso kula qaatay Qoomiyada Ormada ee ku nool magaalada Bosaaso, waxaana magaalooyinka Hargeysa iyo Bosaaso ka dhacay jidh dil lagu sameeyey qaar kamid ah shacabka kasoo jeeda Qoomiyada Oromada.
Gudoomiye oromadu markey qayb LA wareegto boosaaso oo ay bilaabaan inay faasas Ku dilaan shacabka boosaaso sida ay hada u jarjarayaan caruurta soomaaliyeed baad ogaan doontaa ficilka and sameyneysid
SSC HERO says:
Oromo waa dad aan walaalo nahay ..cadowka puntland waa iidoor oo mushkilad iyo dhibaato ku haya geeska afrika .
oramada ayaa Puntland lagu xasuuqaa maaha somaliand.